​मध्यमस्र्याङ्दीको एउटा टर्वाइन विग्रियो, २६ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन
लमजुङ । लमजुङमा रहेको ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत केन्द्रको एउटा टर्वाइन विग्रिएपछि मर्मत शुरु गरिएको छ । ३५/३५ मेगावाट क्षमताका दुई वटा टर्बाइनमध्ये युनिट १ बिग्रिएपछि मर्मत शुरु गरिएको..
​बक्यौता कर फछ्र्योट गरेर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न जोड
काठमाडौं । कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएका बक्यौता कर उद्योगी तथा व्यवसायीबाट असूल गरी व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिइएको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको कर फछ्र्योट..
६१ लाखको कारोबार गर्दै १८औं पुष्पमेला सम्पन्न, ४९ हजारद्वारा अवलोकन
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डमा फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको आयोजना गरेको १८ औं पुष्प ब्यापार मेला ६१ लाखको कारोबार गर्दै मंगलबार सकिएको छ। मेला अबधिभर ४९ हजारभन्दा बढीले मेला अबलोकन गरेको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन..
​म्याग्दीमा तीन करोड ८२ लाख विद्युत् रोयल्टी
म्याग्दी । जिल्ला विकास समिति म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु तीन करोड ८२ लाख ५४ हजार ५०० विद्युत् रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । विद्युत विभागबाट प्राप्त भएको रकमलाई कार्यदल..
एडिबी प्रक्षेपणः आर्थिक बृद्धि दर ४.६ प्रतिशतमा सीमित
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको मूल्य बृद्धि दर नियन्त्रणभित्रै रहे पनि आर्थिक बृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–२०१५ सार्वजनिक गर्दै एडिबीले आर्थिक बृद्धि..
​प्रसारण लाइन निर्माण गर्न राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापना हुने, अधिकृत पुँजी २५ अर्ब
रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले मुलुकभर प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको सहमतिप्रति सकारात्मक हुँदै कम्पनी..
​सेनाले सेवामूलक उद्योगमा लगानी गर्ने, सेनाको कोषमा ३९ अर्ब, जलस्रोत र कृषि प्राथमिकतामा
काठमाडौं । नेपाली सेनाको कल्याणकारी बोर्डले जलस्रोत, पर्यटन, कृषि तथा सेवामूलक उद्योगमा लगानी गर्ने भएको छ । सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लघुवित्त जस्ता क्षेत्रमा बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सिपाहीलाई सुविधा..
अमेरिकी डलरको भाउ सय रुपैयाँ कम
काठमाडौं । तीनदिनदेखि लगातार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ मंगलबार घटेर सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । शनिबार, आइतबार र सोमबारको तुलनामा ३४ पैसाले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका..
​आर्थिक वर्ष असार १ गतेबाट सुरु गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले आर्थिक वर्ष असार १ गतेबाट सुरु हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा...
नेपाली कागज उत्पादनमा नयाँ प्रबिधिको प्रयोग
म्याग्दी । म्याग्दीमा नेपाली कागज उत्पादनमा नयाँ प्रबिधिको प्रयोग भएको छ । न्यानो घरमा कागज सुकाउने प्रविधिको प्रयोग भएपछि कागज उत्पादनमा नियमितता हुनुका साथै उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको छ । म्याग्दीको..
​फिटराईट र बाटाको ग्राण्ड सेल मेलामा ७० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट
काठमाडौं । नयाँ वर्षको अवसरमा बाटा एवं फिटराईट कम्पनीले आयोजना गरेको ग्राण्ड सेल आयोजना गर्ने भएको छ । मेलामा बाटा, फिटराईट एवं सिग्नेचर ब्राण्डका जुत्ता तथा चप्पलहरुको खरिदमा ७० प्रतिशतसम्मको विशेष..
​साढे १३ मेगावाटको बेत्रावती हाइड्रोकोे वित्तीय व्यवस्थापन
काठमाडौं । वेत्रावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित १३.७ मेगावाट क्षमताको फलाखु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरेको छ । बिहीबार बैंक अफ काठमाण्डुको नेतृत्वमा सनराईज बैक, लक्ष्मी..
​कोकाकोलाको उपहार योजना
काठमाडौं । कोकाकोला नेपालले नयाँ उपहार योजना ल्याएको छ । ‘कोकाकोलाले ‘जसले खोल्यो,क्लियर बोल्यो’ उपभोक्ता योजना ल्याएको हो । योजना मार्फत ग्राहक सामसुङ ग्यालेक्सी जेवान जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ..
​सुनको भाउ बिहीबार प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । छापावाल सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रतितोला ५० हजार एकसयमा कारोबार भएको सुन बिहीबार ५० हजार सातसय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले..
सौन्दर्य मेला आयोजना गर्दै ब्युटिसियन व्यवसायी
काठमाडौं । सौन्दर्य व्यवसायी संघले राजधानीमा बेरिना सौन्दर्य मेला आयोजना गर्ने भएको छ । चैत १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म आयोजना हुने मेला त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजना हुनेछ । सौन्दर्य..
​वैदेशिक लगानी एक खर्ब ६० अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । मुलुकमा तीन हजार २ सय वैदेशिक लगानीका परियोजना सञ्चालनमा रहेका र तिनमा रू। एकखर्ब ६० अर्बको लगानी भएको पाइएको छ । सरकारले उदार वैदेशिक लगानी नीति र एकद्वार प्रणाली..
​रुसले फिर्ता माग्यो ५७ वर्षअगाडिको सोभियतकालीन ऋण
काठमाडौं । रुस सरकारले ५७ वर्षअगाडि तत्कालीन सोभियत संघले नेपाललाई दिएको ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ऋण तिर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोभियत संघ विघटन भएको २६ वर्षपछि रुसले..
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबारे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई खुल्लापत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिल कोईराला, नेपाल सरकार महामहिम् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार हामी निम्नलिखित सरोकारवाला नागरिकहरुले केहि समय अघिदेखि नेपालको जलस्रोतको विकास सम्बन्धि घटना क्रमहरु नियाल्दै आउने सिलसिलामा..
विप्लव भन्छन् – यसरी गर्न सकिन्छ ‘एकीकृत क्रान्ति’ संक्रमणकालको अन्त्य भइसकेको निश्कर्ष
काठमाडौं । नेकपा माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले कपिलवस्तुमा बुधबारदेखि भूमिगतरुपमा दुई दिने राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छन् । छापामार संघर्षको तयारीमा रहेका उनले ‘एकीकृत क्रान्ति’को कार्यदिशा अघि सारेका छन्..
Results 889: You are at page 30 of 30